အလယ်ခေတ်ကာလကနေဘုရားရှိခိုးကျောင်း enchanting နေကြတယ်, အံ့သြဖွယ်, နှင့်စူးစမ်းလေ့လာရန်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်. နှင့် Strasbourg ဘုရားကျောင်းမှာ သူတို့တွင်အရပ်ရှည်ရှည်ရပ်တည် - စာသား, ဒါဟာသည်အထိကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ် 1874! ထိုသို့တချို့ကအစိတ်အပိုင်းများနေ့စွဲအဖြစ်ဝေးကျောအဖြစ် 1100, ဒီသမိုင်းဝင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရပ်နေခဲ့ပြီးမည်မျှရှည်လျားမှစစ်မှန်သောသေတမ်းစာအရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအတွင်းပိုင်းကိုစူးစမ်းခြင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာစာစောင့်ကြည့်ဖို့ကပ်ဖို့ရှေးခယျြဖွစျစေ, သငျသညျအထင်ကြီးခံရဖို့တာပေါ့.
Strasbourg ဒုတိယအကြီးဆုံးရှိပါတယ် မီးရထားဘူတာရုံ ပြင်သစ်မှာ, ပဲရစ်ပြီးနောက်ညာဘက်. မီးရထားဖြင့်ရောက်ရှိအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သင်ယူ၏ option ရှိသည် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား TGV (မြန်နှုန်းမြင့်ရထား) ကိုယ်ကသာအတွက်ပဲရစ်ကနေ Strasbourg ရန်သင့်အားယူနိုင်ခဲ့2နာရီနှင့် 20 မိနစ်များ, အစားပုံမှန်၏4ကားဖြင့်နာရီ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-strasbourg-train%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)